The Rohingya News Bank : ရခိုင်
Showing posts with label ရခိုင်. Show all posts
ရခိုင် ဘယ်သူလဲ ? ရိုဟင်ဂျာ ... by Kyauk Taw Family
Labels: Book, mm, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ
“ကျွန်တော်တို့မှာ ဝ ထက် မညံ့တဲ့ မျှော်မှန်းချက်တော့ ရှိတယ်”- ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်
ဝ ပြည်နယ် ပန်ဆန်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု နှစ် (၃၀) ပြည့်လို့ နာ မည်တပ် ထား တဲ့ ဝ ပြည်နယ် တည်ထောင်တဲ့နေ့မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်း စုံက ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရောက်နေကြပါတယ်။ အစိုးရဘက်က ကိုယ်စား လှယ်အနေနဲ့ ဦးသိန်းဇော်နဲ့ ဦးဇော်ဌေးတို့ တက် ရောက်လာပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လတ်တလော မြန် မာ့ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ် နေ တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) က စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင်တို့လည်း တက်ရောက် လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဝ ပြည်နယ်၊ ပန်ဆန်းမြို့ကို ရောက်ရှိနေ တဲ့ Frontier အကြီးတန်း သတင်းထောက် မြတ်ကျော်သူက AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ပန်ဆန်း, ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်, ရခိုင်, ဝ, မေးမြန်းခန်း
ရခိုင်မှာ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြု ချက်ယူဖို့ ညွှန်ကြား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင့်တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူတွေ ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ များပြားလာနေပြီး လက်ရှိမှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေဟာ ၃ သောင်းနီးပါးကို ရောက်ရှိ နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေဟာ တိုက်ပွဲလွတ်ရာ ကျေးရွာတွေက စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေအပြင် နီး စပ်ရာဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာ ယာယီသွားရောက်ခိုလှုံနေကြရတာပါ။
Labels: 2019, mm, စစ်တွေ, တပ်မတော်, ပြည်နယ်အစိုးရ, ရခိုင်, ရဲတပ်ဖွဲ, ဦးအောင်သန်းမြင့်
ရခိုင် တိုက်ပွဲတွေ အပေါ် အမေရိကန်ရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မြန်မာနွယ်ဖွားတွေ မြို့တော် ၀ါရှင်တန်မှာ ဆန္ဒပြ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေကြေ၊ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေရတဲ့ ဒေသတွင်း စစ်ပွဲတွေကို အမေရိကန်ရောက် ရခိုင်လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ မြန်မာပြည်ဖွား ရာနဲ့ချီပြီး တနလာင်္နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာသံရုံး၊ အမေ ရိကန် သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်နဲ့ အမေရိကန် လွှတ်တော်ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာ သံ အမတ်ကြီးနဲ့လည်း ဆန္ဒပြသူတွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြပေးမှာပါ။
Labels: 2019, AA, mm, ဆန္ဒပြ, ရခိုင်, ဝါရှင်တန်မြို့, သတင်း, အိမ်ဖြူတော်, မြောက်ဦးမြို့